Iingcebiso zokuzoba umzimba womntu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Enye yezinto ezinzima kakhulu kwimbono yam yile zoba umzimba womntu, okokuqala ukuze babe nokufaka zonke iinkcukacha zayo baze babeke ephepheni ngokuthembeka kangangoko, ngumceli mngeni amaxesha amaninzi ongenakoyiswa.
Ngethamsanqa, konke akulahlekanga, sukutyhafa kuba Kukho iindlela, ubuchule, amaqhinga kunye neengcebiso inokuba luncedo kakhulu xa uzobe umzimba womntu. Akunakukhathaza ukuqala, ukuphanda ezinye ze i-anatomy yomzimba, kuba iinkcukacha ezithe kratya esizaziyo ngayo, kuya kuba nzima ukuyidweba, eyona nto intle kukuba unokufumana ulwazi oluninzi kwiwebhu nakwiincwadi.
1 Yintoni ekufuneka uyazi ukuzoba umzimba womntu?
2 Ungabufezekisa njani ubunzulu kunye nentshukumo kwimizobo yakho
Yintoni ekufuneka uyazi ukuzoba umzimba womntu?
Siza kubonelela ngolwazi, ukuncedisa kunye noncedo ikakhulu kwabo baqala emhlabeni wokuzoba umzimba womntu.
Kubalulekile ukuba wazi ngalinye lamalungu ayenzayo, phanda ukuba ngoobani amathambo kunye nezihlunu Ezona zibalulekileyo kwaye zibalulekileyo kunye / okanye ezo zivelileyo ekuqaleni, unokulufumana olu lwazi kwiitekisi malunga nokwakheka komzimba.
Wazi umohluko olinganayo phakathi komfazi nendoda, yeyiphi imilinganiselo esemgangathweni iphathwa ngokwendlela yokwakheka kwezi meko, ngubani onemilenze emide okanye ezona zandla zinkulu, ubukhulu phakathi kwamalungu omzimba kwisini esifanayo, njl., kuba konke oku kuya kuba luncedo, ewe, ngaphandle kokulahla Kuzo zonke iimeko kuyafana, kukho umahluko othile.
Yenza umkhwa ukuqala imigca esisiseko njengoko kufundisiwe ukuzoba izikolo (izangqa, iingxande, njlnjl.) nasemva kokuba umzimba uphelele, uqala ukunika inkcukacha kwilungu ngalinye lomzimba ukongeza ezinye
Ukujonga ngokweenkcukacha abantu abasingqongileyo kuya kukubonelela ngeendlela ezahlukeneyo ze indlela umzimba womntu onokwahluka ngayo kuxhomekeke kubudala bakho, isini, umsebenzi, ukuba ubhityile okanye utyebile, ngawaphi amalungu omzimba abonakala ngakumbi kwisini esinye nakwezinye, zeziphi iifom ezinophawu oluqhelekileyo kwisini ngasinye nakwabanye
Imeko nganye kunye neefom onokuzijonga zibalulekile, ngaba izibane zinxibelelana nomzimba, utshintsha njani umbono? Ukuba ngokuchaseneyo kukho ubukho bezithunziIyichaphazela njani imbonakalo ebonakalayo, yintoni eyongeza okanye isusa kuyo? Qaphela konke oku okanye okungcono okwangoku, yibeke ephepheni kwangoko.
Qalisa isiketshi sakho ukuqala kumathambo ngokwawo, khetha indawo, ziqhelisele kunye kunye yiya kuwufezekisa umsebenzi wakho; Xa uziva wanelisekile, qhubeka ukongeza izihlunu de ufike kumzobo ngendlela oyifunayo.
Kufuneka ziqhelanise kakhulu, Zoba ngaphandle kokuma ukuze ugqibezele iinkcukacha nganye zomzimba womntu.
Nje ukuba uve ukuba sele isisizinda sakho ukuzoba umzobo, elinye inqanaba liza ngalo ungongeza izinto ezibaxa inani okhulelwe ekuqaleni, inokukunika ubuntu ngakumbi kwaye ibenze babonakale.
Ungabufezekisa njani ubunzulu kunye nentshukumo kwimizobo yakho
Nje ukuba isigaba sokuqala soyisiwe, kubonakala ngathi kukho umqobo omtsha, onje unike imvakalelo yobunzulu kunye nentshukumo kumzobo wakho. Kwangexesha ndiyakuxelela ukuba ukuziqhelanisa nomonde kubalulekile ukuze ufezekise oku.
Zinikezele jonga indlela umntu ahamba ngayo, iinkcukacha zendlela yokuhamba, ukuba kuhamba ngamanyathelo amade okanye amafutshane, ukuba iyabaleka, ihambisa njani iingalo, imilenze, indlela ezisebenza ngayo izihlunu kwaye xa uyisa ephepheni, zama ukumela eyona nto yoyikekayo kubonwe ukufezekisa iziphumo ezilindelekileyo.
Jonga abantu abavela ii-angles ezikunika umbono, njengasentla, umzekelo, jonga indlela amanye amalungu abonakala emakhulu ngayo kunamanye, indlela ukukhanya nesithunzi esidlala ngayo, oku kuya kuba luncedo kakhulu.
Sebenzisa iifoto njengesalathiso ku zoba iinxalenye ezincinci nezinzima kwaye aphande kwizicatshulwa malunga nokuzoba, kwiwebhu ujonga imifanekiso kunye neenkcukacha ezimeleyo, ngawaphi amalungu abonakala emakhulu okanye emancinci ngokuxhomekeke kwi-engile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Iingcebiso zokuzoba umzimba womntu
oku komkhombandlela ngamanani elungu ngalinye lomzimba womntu kugqwesile, kuba kwiintloko ezilukhuni njengam, ibonisa ngokucacileyo iprotocol ekufuneka ilandelwe ukuzoba umzimba ... ndiyathemba ukuyenza ngalo lonke ixesha, kwaye Yoyisa ubuvila obuthembekileyo obulawula kwintando yam ... ABANINZI, KODWA UYABulela kakhulu ...
Iinkqubo zokubonisa, ukupeyinta nokuzoba kwidijithali
Yenza iikhredithi ngeAdobe yeNkulumbuso yeeprojekthi zakho zokumamela